Qaramada Midoobay Oo Walaac Ka Muujiyey Xadgudub Ka Dhacay Dagaalka Gobolka Tigray • Oodweynenews.com Oodweyne News
“Damacaygii, Doodaydii iyo Dudmadaydii waxa la mooday inaan Kulmiye ka tagay ee…” – Maxamuud Xaashi Cabdi
Mareykanka oo daabacaya warbixin ku saabsan dilkii Jamal Khashoggi
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay heshay warbixinno “walaac leh” oo ku saabsan xadgudubyo dhinaca galmada ah ama kufsi oo ka dhacay gobolka ay colaadda ka taagan tahay ee Tigrayga Itoobiya.
“Haweenka qaarkood ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in cunsurro ay ku qasbeen inay galmo sameeyaan iyagoo badeecooyin u baahan.” Patten waxay ugu baaqday dhamaan dhinacyada ku lugta leh dagaalada inay ku kacaan siyaasad dulqaad la’aan ah dambiyada rabshadaha galmada. Rayisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, oo ku guuleystay Abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2019, ayaa ku dhawaaqay hawlgallada militari ee ka socda Tigreega horraantii November, isaga oo sheegay in ay ku yimaadeen jawaab u ah weeraradii xisbiga maamulka gobolka uu ku qaaday xeryaha ciidamada federaalka.
Abiy ayaa ku dhawaaqay guusha kadib markii ciidamada federaalku galeen xarunta gobolka dabayaaqadii bishii Nofeembar, in kasta oo hoggaamiyeyaasha ururka (TPLF) ay wali ku sii dhuumaaleysanayaan isla markaana ay ballan qaadeen in ay sii dagaallami doonaan.